iWeb Muqaal: Sida loo abuuro Gallery Muqaal ah ee iWeb
> Resource > Talooyin > Sida loo abuuro Muqaal Gallery ah ee iWeb
iWeb, qayb ka mid ah Suite codsiga iLife ee Mac (Mac OS X 10.8 ka mid ah) by Apple, waa "Wixii aad aragtid haddii waxa aad ka heli" website abuurka iyo web page tafatirka software. Waxa dhab ahaan waxa ku andacoonaya - WYSIWYG xataa marka aanad gashan ah slideshow photo gallery. Haddaba bal fiiriya sida ay u abuuraan iWeb slideshow talaabo talaabo ah in this article.
Qeybta 1: Samee Muqaal iWeb ah ee Flash
Qeybta 2: In la abuuro Gallery ah ee iWeb iyo Play sida Muqaal
Via Wondershare Flash Gallery Factory, fudud ah si ay u isticmaalaan gaare slideshow photo u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah), oo aad si fudud oo dhaqso loo abuuro kartaa gallery slideshow cabsado qaar ka mid 2D cajiib ah ama arrimo 3D. Marka slideshow ah loo abuuray, waxa kale oo ay fududahay in Cudarada galay pages iWeb aad. Raac talaabooyinkan hoos ku geliso slideshow ah in bogagga iWeb.
Abuur ah iWeb bogga cusub ee ay File> New Page
Dooro "HTML jeex" ka " Insert "menu in la furo" HTML jeex "window.
Dhaji code saxafiyiinta aad ka codsiga u gelin suuqa kala HTML jeex iyo riix batoonka "codso".
Ka dib markii in, waxaad arki doontaa slideshow iWeb markaas oo diyaar u yahay inuu la daabici online adigoo isticmaalaya dhisay-in iWeb daabacaan qalab.
Halkan waa tusaale slideshow iWeb.
Fiiro gaar ah : Habkani in aad is geliso slideshow ah ee iWeb ku haboon, waana hab wanaagsan oo la website aad visitors sawiro aad. Laakiin fursadaha yar yihiin wax timewasting ah waa marka aad rabto inaad la wadaagto tiro badan oo sawiro.
1.Open iWeb iyo dooro File> New Page in lagu daro bog si aad goobta exsited. Haddii aad bilaabin isticmaalka iWeb, waxaad u baahan tahay in ay doortaan template ah ee aad website ka hor webpage cusub la abuuro.
2.In template daaqadaha webpage, dooro template ah aad u webpage. Halkan waxaan ku doortaan Photos sida tusaale ahaan. Riix Dooro.
3.A page default la abuuri doonaa sawiro iyo qoraallada placeholder. Browser Media Open (View> Show Media) oo taga si Photo tab in jiidi oo hoos u photos in placeholder sawirka. A hadal Roobka sawir ka muuqan doontaa. Waxaa waxaad go'aansan kartaa sida aad iWeb gallery eegi doonaa sida, iyada oo fursado sida tiirar, sawiro halkii bog, khadadka caption, iyo wixii la mid ah.
4.Open Isbatooraha in ay u samaysaa saldhigyo in slideshow iWeb. Iyadoo Roobka sawirka waa la xusho, riix badhanka Isbatooraha in la furo Isbatooraha wada hadal iyo bedesho Muqaal tab.
5.First hubi sahlo slideshow doorasho haddii aysan. Waxa ugu muhiimsan waa in ay doortaan guurka ah ee slideshow oo xakameeyo jidkii sida hal sawir Isbedelada kale ee slideshow iWeb ah. Sidoo kale siiso milicsiga slideshow iWeb ama qoraalka si ay u sii xarrago leh.
6.Click naadiya Site in lagu daro bog cusub la slideshow in aad website on MobileMe ama meel kasta oo aad ku qeexan goobaha Site ah. Si aad ku eegaan iWeb slideshow la Safari, waxaad u baahan tahay dooro " naadiya in Folder Local ".